IXiaomi Mi MIX 3 5G isungulwe ngokusesikweni eSpain | I-Androidsis
IXiaomi Mi MIX 3 5G ifika eSpain ngokusemthethweni
I-Xiaomi Mi MIX 3 5G yaziswa kwi-MWC 2019 edlulileyo ngokusemthethweni. Yifowuni yokuqala yohlobo lwesiTshayina ukuba ibe ne-5G, Umzuzu obalulekileyo womenzi. Ukuqaliswa kwayo kuye kwafuneka ilinde kancinci, nangona ekuqaleni kwale nyanga ifowuni ingene kwimarike yaseYurophu, ngokukodwa eSwitzerland.
Ke ngoko, bekulindeleke ukuba kwezi veki sixhobo siza kuqaliswa kwezinye iimarike. Injalo imeko ngoku, njengoko ukumiliselwa kwale Xiaomi Mi MIX 3 5G ngokusemthethweni eSpain. Ifowuni yokuqala ye-5G yokufika kwintengiso.
Ukuqaliswa kwefowuni kwenzeka ngaphambi kwexesha. Kubonakala ngathi ukuqhubela phambili kwe-5G eYurophu, eza kuqala ngeli hlobo, ngesandla neVodafone, ibangele ukuba le nkampani yenze esi sigqibo. IXiaomi Mi MIX 3 5G izakufika kule veki ngokusemthethweni eSpain, nge-23 kaMeyi kuya kubakho ukuyithenga.
Sisibhengezo esisemthethweni ngoku, yona le nkampani ngokwayo iye yabelana ngayo kwiinethiwekhi zayo. Ke ezi ayingomarhe. Ukwaziswa okubalulekileyo, kuba yifowuni yokuqala ye-5G esinokuyithenga eSpain. Njengesiqhelo kwiifowuni zorhwebo, iza nexabiso elifanelekileyo.
Ixabiso lale Xiaomi Mi MIX 3 5G lisungulwe ngexabiso le-599 euro, kuqwalaselo lwayo lwe-6/64 GB kuphela. Singayithenga kwiwebhusayithi esemthethweni yohlobo lwesiTshayina. Abo banomdla kwifowuni baya kuba nakho ukuyithenga ngemibala emibini: emnyama neblue. Asazi ukuba izakufumaneka nini nakwezinye iivenkile.
Ukukhululwa okukhulu komenzi, Ebona indlela eyanda ngayo le fowuni kwintengiso yaseYurophu. Ke ngoko, ukuba ufuna ukuba nefowuni yokuqala yohlobo lwesiTshayina nge5G, inokwenzeka. Ucinga ntoni malunga nokuqaliswa kwale fowuni yeXiaomi eSpain?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » IXiaomi Mi MIX 3 5G ifika eSpain ngokusemthethweni
Umboniso wamva nje we-Honor 20 Series Ukwakhuthaza abantu be-X: Umboniso bhanyabhanya oMnyama wePhoenix